Windows 10 ny namorona ny famoronana vaovao - VipCasting.cz
Windows 10 Fivoriambe nahafatesana
Mpanjifa maty, Update, Windows 10
Ny Talata 17. Ny volana oktobra, Microsoft dia mikasa ny hanomboka hampiasa paik'ady vaovao amin'ny Windows 10 ny mpampiasa. Ny lazaina Ny Creator Update Update (1709 version) dia mitondra fanatsarana maro amin'ny rafitra.
Tokony hanolotra anao na hametraka ny rafitra ho anao ny fanavaozana ny Update Creators Update. Raha mbola tsy nitranga iny ary tsy te hiandry ianao, dia tokony ho afaka haka an-keriny azy amin'ny tranonkala Microsoft ianao - Microsoft dia hamoaka izany.
Ny timeline dia mamela anao hiverina tsindraindray mba hahalalanao ny zavatra niasanao ary na 2 na 2 ora lasa izay. Miverena any amin'ny rakitra, fampiharana, ary tranokala toy ny hoe tsy nandao anao mihitsy.
Ampidiro ny rakitrao ao anaty rahona raha tsy mampiasa ny toerana fitehirizana ny fitaonao miaraka amin'ny OneDrive Files on Demand. Azonao atao ny mahita ny rakitra rehetra ao amin'ny File Explorer ary afaka miditra amin'ny fangatahana raha ilaina.
Ny mpankafy Movie Maker dia hientanentana amin'ny Remix. Mifidiana sary sy lahatsary, ampio mozika, fiovàna, ary na ny 3D. Tsindrio ny bokotra ary voilà - manana version vaovao vaovao amin'ny lahatsary ianao.
Jereo ireo zavatra 3D ao amin'ny tontolo misy anao ary makà sary avy amin'ny fakantsary ivelan'ny solosainao.